Methandrostenolone (Dianabol) ntụ ntụ (72-63-9) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Anabolics Steroids / Methandrostenolone (Dianabol) ntụ ntụ
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Methandrostenolone (Dianabol) ntụ (72-63-9), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkwa mma.
Methandrostenolone (Dianabol) ntụ ntụ bụ onye na-ahụkarị steroid nke nwere ike ịba ahịa na otu n'ime ndị na-ahụkarị steroid n'ụdị ọ bụla. Ọ bụ ezie na a na-achọtakarị ka mbadamba ụrọ, Dianabol nwere ike ịchọta dịka ngwọta injectable, mana mbadamba nkume ahụ na-anọchi anya ụzọ isi nchịkwa.
Methandrostenolone (Dianabol) ntụ ntụ isi Characters
aha: Methandrostenolone (Dianabol) ntụ ntụ
Molekụla Formula: C20H28O2
Ọbara arọ: 300.44
Methandrostenolone (Dianabol) uzuzu eji eme ihe na steroid
Methandrostenolone (Dianabol) ntụ ntụ na-akpọkwa Methandrostenolone ntụ ntụ, methandienone, Dianabol ntụ ntụ, dbol, Averbol, Danabol, Metanabol, Naposim, Vetanabol.
Methandrostenolone ntụ ntụ Usage
Ọdịdị usoro nke Dianabol ntụ ntụ bụ 20-50 mg / ụbọchị.
Dịka, a na-ejikọ ihe a na banyere 500-1000 mg / izu izu nke ọgwụ ndị anabolic injected.
Ịdọ aka ná ntị na Dianabol ntụ ntụ
Ụdị Dianabol ntụ ntụ ga-adịgasị iche dabere na ahụmahụ na ọchịchọ mmadụ. N'agbanyeghị ntanetị na akụkọ ụgha, kọmputa Dbol ga-emepụta ihe dị ịrịba ama dịka 15mg kwa ụbọchị. Otú ọ dị, ihe ka ọtụtụ ga-enwe afọ ojuju karịa 20-25mg kwa ụbọchị. Buru n'uche, oge ọ bụla anyị mejupụtara dose ahụ, nke a na-eme ka o nwekwuo ohere nke mmetụta na-adịghị mma ma na-eme ka ha sie ike ịchịkwa.
Methandrostenolone ntụ ntụ bụ testosterone ewepụtara anabolic androgenic steroid. N'ikpeazụ, ọ bụ ụdị mgbanwe nke usoro isi nke nwoke na etrogen testosterone. Dianabol ntụ ntụ bụ hormone testosterone na nkwonkwo abụọ agbakwunyere na carbon otu na ọnọdụ abụọ. Ngbanwe mgbanwe a na-ebelata ọdịdị androgenic nke hormone.
Dianabol ntụ ntụ
Methandrostenolone (Dianabol) ntụ ọka Marketing
Esi zụta Methandrostenolone ntụ ntụ: zụta Dianabol ntụ ntụ si AASraw
AAS raw na-enye ọcha 99% Methandrostenolone / Dianabol raw ntụ ntụ ka n'okpuruala labs maka ọnụ ọgụgụ buru ibu uru ojiji.
Methandrostenolone ntụ ntụ Ezi ntụziaka
Ebee ịzụta akwa dị ọcha Dianabol ntụ ntụ?
DianabolMethandrostenolone powdereffects, usoro onunu ogwu, ihe niile i kwesiri ima !!!
Nandrolone propionate ntụ ntụ